Nageenya soorataa - BBC News Afaan Oromoo
...tti maxxanfame 10:05 17 Adooleessa 202110:05 17 Adooleessa 2021
‘Dhamdhamni qurxummii dheedhii addadha’ – Jiraataa Hawaasaa
Video caption: Foon dheedhii qurxummii nyaachuun magaalaa Hawaasaa keessatti akkaan ho'aa jira.Foon dheedhii qurxummii nyaachuun magaalaa Hawaasaa keessatti akkaan ho'aa jira.
...tti maxxanfame 6:52 17 Waxabajjii 20216:52 17 Waxabajjii 2021
Kim Jong-un Kooriyaa Kaabaatti hir'inni nyaataa jiraachuu amane
Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un biyyasaa hir'inni nyaataa mudachuu ifatti amane.
...tti maxxanfame 13:09 9 Waxabajjii 202113:09 9 Waxabajjii 2021
Tigraayitti uummatni 'beelaan du'aa jira' jedhan hoogganaan WFP
''Yeroon dhumaa jira. Rakkoo suukaneessaa kana hanbisuuf deeggarsa namoomaa dhorkaa malee dhiyeessuu qabna,'' jedhan hoogganaan kun ergaa fuula Twitter isaanii gubbaatti maxxansaniin.
...tti maxxanfame 13:23 4 Waxabajjii 202113:23 4 Waxabajjii 2021
Addunyaarratti gatiin nyaataa saffisaan qaala’aa jira-FAO
Addunyaarratti gatiin nyaataa saffisaan qaala’aa jira
...tti maxxanfame 10:49 23 Caamsaa 202110:49 23 Caamsaa 2021
Ameerikaan hindaaqqolii hin dhungatiinaa jechuun lammiilee gorsite
Giddugalli To'annoo Dhukkubaa Ameerikaa (CDC) weerara saalmonellaaf jecha namoonni hindaaqqolii akka hin dhunganne gorse.
...tti maxxanfame 10:17 12 Caamsaa 202110:17 12 Caamsaa 2021
Anga'aan naannoo Tigraay, jiraattotta qonnaa irraa dhorkuuf sochiin gaggeeffamaa jira jechuun, kun namootni sababa beelaan akka du’an gochuu mala jechuun akeekkachiisan.
...tti maxxanfame 4:37 6 Caamsaa 20214:37 6 Caamsaa 2021
Biyya 'qote-bulaan omishasaatti hin fayyadamne' Itoophiyaan akkamiin qaala’iinsa hir'isti?
Adeemsi omishni qotee-bulaa irraa gara fayyadamtoota bira ga’uuf keessa darbu qindaa’aa akka hin taane ogeessonni dinagdee hedduun irratti waliigalu. Dhimmi kun qaala’iinsa jireenyaaf gumaacheeraa laata? Fallisaa hoo?
...tti maxxanfame 11:50 22 Amajjii 202111:50 22 Amajjii 2021
'Tigraay keessatti namoonni miliyoona 4.5 deeggarsa hatattamaa fedhu'
Lolli Tigraay rakkoo Covid-19 fidee fi weerara hawwaannisaa sababa jijjiirama qilleensaan mudateen walitti dabalamee, namoota miliyoonaan lakkaa'aman fiixee gadadoorraan gahee jira jedhe beela irratti kan hojjetu Oxfam.
...tti maxxanfame 6:23 3 Muddee 20206:23 3 Muddee 2020
Singaappor foon ‘hindaaqqoo’ laaboraatorii keessa tolfame eeyyamte
Singaappor foon bineeldotarraa hin argamneefi laaboraatorii keessa tolfame ummanni akka itti fayyadamu eeyyamte. Kunis, biyyattii biyya jalqabaa taasisa.
...tti maxxanfame 13:47 13 Hagayya 202013:47 13 Hagayya 2020
Chaayinaan qisaasama nyaataa hambisuuf duula jalqabde
Chaayinaan qisaasama nyaataa hir’isuuf tarkaanfii fudhachaa jirti. Pireezidantiin biyyattii Shii Jiinpiing hangi nyaataa bade ‘kan nama rifaasisuufi yaaddessu dha,’ erga jedhaniin booda dha murtoon kun kan dhufe.